I-BEST Blue Exorcist Quotes Eyocindezela Imizwelo Yakho - Okunye
Blue Exorcist izinhlamvu ezishiwo kulokhu okuthunyelwe:
IBlue Exorcist ingenye ye- kakhulu odumile uchungechunge lwamademoni ngesizathu. Kugcwele amandla, futhi kugcizelela ukubaluleka kwabangane nomndeni.
Lezi yizinhlobo zezingcaphuno ongazilindela kulokhu okuthunyelwe. Ngezingcaphuno ezimbalwa 'ezijabulisayo' zokukusiza ukhumbule i-anime nge.
Noma iziphi iziphakamiso zingabiwa kumazwana abekiwe.
Izilinganiso zeBlue Exorcist Ezingasoze Zalibaleka:
Izilinganiso zika-Yukio Okumura
'Kusukela manje kuqhubeke… Ngizovikela umfowethu esikhundleni sobaba.' - Yukio Okumura
'Indlela engcono yokuphumelela ukusebenzisa amakhono akho ngokugcwele.' - Yukio Okumura
'Noma ngabe ufuna kangakanani, angeke esaba ngumuntu ojwayelekile.' - Yukio Okumura
Izilinganiso ze-Rin Okumura
'Awucabangi ukuthi izinkumbulo eziyiqiniso ziyinhlanganisela yezimnandi nezibuhlungu?' - Rin Okumura
“Ubungangethemba, ngakho nami ngizokwethemba. Lokho kusho ukuthi ukuba abangane, akunjalo? ' - Rin Okumura
“Ubumthanda kakhulu ubaba, angithi? Yingakho wawudabukile. Ngiyafana - asibe abangani. ” - Rin Okumura
'Musa nje ukwahlulela abantu ngendlela ongathanda ngayo.' - Rin Okumura
'Okwedlule akumele kukuvimbe ekufezeni izinhloso namaphupho akho.' - Rin Okumura
'Unondindwa wokuphila, ngakho-ke uma kulula, wenza kabi.' - Rin Okumura
“Angihlakaniphile ngokwanele ukuthola izimpendulo noma ngabe ngichitha isikhathi esingakanani ngicabanga. Engingakwenza manje ukukhipha ikhanda lami ngigijimele phambili. ” - Rin Okumura
“Siyapheka ngoba sifuna ukujabulisa umuntu ngokudla kwethu. Siyajabula uma besitshela ukuthi kuhle. Yingakho ngithanda ukupheka nokuthi kungani ngifuna ukupheka. ” - Rin Okumura
'Okwamanje, konke isilima njengami esingakwenza ukuqhubeka nokuqhubekela phambili.' - Rin Okumura
'Ngizosebenzisa amalangabi ami ngenhloso engcono!' - Rin Okumura
“Angikwazi ukwehlela lapha! Ngathembisa ethuneni likababa ukuthi ngizoba yisidlamlilo esikhulu njengaye futhi ngikhahlele imbongolo kaSathane! ” - Rin Okumura
“Senelisekile manje? Uma lokhu namanje kunganele kuwe, ngizokulwa izikhathi eziningi ngendlela ofuna ngayo. Sengijwayele le nkinga. Ngakho-ke ngiyakuncenga: musa ukuhudulela abantu abangenacala kulokhu. ” - Rin Okumura
“Anginandaba nokuthi uthini noma ucabangani. Ubaba nguShiro Fujimoto akekho omunye! ” - Rin Okumura
'Impela kuhle ukuhlakanipha, kodwa ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi kube khona zonke izinhlobo zabantu emhlabeni.' - Rin Okumura
“Angisona isikhali sakho, inkosi yamademoni, noma umsindisi! NginguRin Okumura! Futhi lapho sengiqedile, ngizoba yisazi sokukhipha amadimoni esihle kunazo zonke owake wabeka amehlo akho kuzo. ” - Rin Okumura
'Ungangikhuluma kabi ngendlela ongathanda ngayo, kodwa ungahlekisi ngomfowethu!' - Rin Okumura
Izilinganiso ze-Neuhaus Igor
“Angisoze ngamxolela uSathane, nanoma yimaphi amademoni akhe! Futhi impela akuyona indodana kaSathane! Ngizokubulala, ngisho noma kungangilahlekisela ngokuphila kwami! ” - Neuhaus Igor
'Akunandaba ukuthi ubukeka kanjani, inqobo nje uma ukwahlulela kwakho kufiphele ngeke ulithole iqiniso.' - Neuhaus Igor
Izilinganiso zikaShiro Fujimoto
'Ngiguga kakhulu ukuthi ngivikele ingane efana nawe.' - UShiro Fujimoto
'Awusoze wakwazi ukuqhubekela phambili uma wesaba ukungcolisa izandla zakho.' - UShiro Fujimoto
“Siwula esincane, amadimoni akhona, kulungile. Zingaphakathi kwezinhliziyo zethu. ' - UShiro Fujimoto
“Lalela, Rin. Uma uqhubeka kanjena, uzoba wedwa. Sebenzisa amandla akho komunye umuntu, ezintweni ezinomusa. Ngifuna ube umfana opholile onabangani abaningi abathandwa amantombazane! ' - UShiro Fujimoto
'Uma ungakuthandi ukuphathwa njengengane, kungani ungazami ukukhombisa ukuthi ukhule kangakanani.' - UShirou Fujimoto
Izilinganiso zeShima Renzou
'Ngingasho kuphela inhlanhla yamantombazane.' - UShima Renzou
'Ungumuntu olungile .. Ngiyakwethemba.' - UShima Kinzou
Izilinganiso zikaNoriko Paku
'Angimthandi umuntu owenza isiwula ngabantu abazimisele.' - UNoriko Paku
Izingcaphuno zikaRyuji Suguro
“Anginayo i-spineless njengawe! Ngizoba yi-Exorcist yangempela futhi nginqobe uSathane! ” - URyuji Suguro
'Ungazihleki izifiso zabanye abantu!' - URyuji Suguro
“Yeka ukuzama ukuxazulula yonke into uwedwa. Ungakhohlwa ukuthi awuwedwa! ” - URyuji Suguro
“Ungumuntu ongcolile kangaka! Uzoxosha abantu kanjalo uma uqhubeka. ” - URyuji Suguro
Izilinganiso ze-Izumo Kamiki
'Ngiyabazonda impela amagwala asho izinto ezinjengokuthi' Ngizomhlula uSathane 'noma ukuthi' singabangani. ' Lapho abakwaziyo ukuthi babaleke ngezikhathi ezibucayi… Emva kokukhipha amagama amahle. ” - Izumo Kamiki
“Ngokuzithoba ngibiza onkulunkulu bokuvuna. Landela izifiso zami, ungashiyi noyedwa ongagcwaliseki! ” - Izumo Kamiki
Izilinganiso zeShiemi Moriyama
“Akumele ngikhale. Esikhundleni sokuchitha isikhathi ngikhala, namuhla ngizoba nabangane! ” - UShiemi Moriyama
“Noma ungangizonda, ngisakuthanda kakhulu!” - UShiemi Moriyama
'Akunandaba ukuthi wazalwa nini, ngiyajabula ukuthi ulapha!' - UShiemi Moriyama
'Ngiyayithanda le ndawo ... futhi ngithanda uGogo wami kakhulu.' - UShiemi Moriyama
'Noma ngabe zibolile kangakanani lezo zinhlamvu, singenza yonke into iqhakaze ibe luhlaza ngokuphindwe kayinkulungwane.' - UShiemi Moriyama
“Angeke ngibe kanjena, ngihlale ngikhale kanjalo. Ngiye ngibe namandla ngisho nokuqina. Kusekude ukuthi ngihambe ngaphambi kokuba ngithole umoya wokhula. Ngizokubamba, ngakho-ke ngilinde. ” - UShiemi Moriyama
Izilinganiso zeShura Kirigakure
“Shiro, ubungasiphakamisi isikhali. Ubukhulisa indodana. ” - UShura Kirigakure
Umthombo wesithombe ofakiwe: Iphephadonga Elibhakabhaka Elihlaza Okwesibhakabhaka
Kunconyiwe: 21 Kwama-Anime Ama-Anime acaphuna kakhulu mayelana Nempilo
ucezu oluphezulu lwe-10 lwe-anime yempilo